गृह मन्त्रालय प्रवक्तासहित २६ सहसचिवको सरुवा, कसलाई कहाँँ पठाइयो ? - Rajmarga
गृह मन्त्रालय प्रवक्तासहित २६ सहसचिवको सरुवा, कसलाई कहाँँ पठाइयो ?
काठमाडौं । सरकारले गृहमन्त्रालय प्रवक्तासहित २६ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवको बुधबार साँझ सरुवा गरिएको हो ।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केदारनाथ शर्मालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश पोखरामा सरुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव मदन भुजेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बाग्मती प्रदेश हेटौँडा सरुवा गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयका सह–सचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुवकुमार पोखरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयका सहसचिव राष्ट्रपति कार्यालय, काठमाडौँ, गृह मन्त्रालयका सहसचिव जगनाथ पन्त धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलालीमा सरुवा हुनु भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराका सहसचिव किरण राज शर्मालाई संचार तथा सूचना मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । त्यस्तैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बाग्मती प्रदेश हटौंडाका सह–सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सरुवा गरिएकोे छ ।
भरतपुर महानगरपालिका, चितवनका सहसचिव प्रेमराज जोशी रक्षा मन्त्रालय, हेटौडा उपमहानगरपालिका,मकवानपुरका सह–सचिव राजेश पौडेल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बाराका सहसचिव प्रदीप राज अधिकारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ ।
Previous post:आज पनि देशका विभिन्न भागमा हल्कादेखि भारी वर्षा हुने
Next post:बाढीपहिरो र डुबानमा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई सरकारले दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने